News Archives - PARIJATMEDIA
Jul42020 by adminNo Comments
ब्रिटिश आर्मीमा नेपाली जुम्ल्याहा एकसाथ भर्ती
पोखरा। ब्रिटिश गोर्खा सैनिकमा दुई नेपाली दाजुभाइ भर्ती भएका छन् । भोजपुर ट्याम्के मैयुङ गाउँपालिका– गागनेका दाजुभाइ एकसाथ भर्ती भएका हुन् । पोखरामा भएको भर्ना छनौट चरण पार गर्दै दाजु धैर्यशील राई र भाइ क्रियाशील राई एकसाथ गोर्खा भर्ती भएका हुन् । दाजु धैर्यशील बीबीए सातौं सेमेष्टर र क्रियाशील बीबीएस दोस्रो वर्षमा पढ्दै थिए । धैर्यशील र क्रियाशीलका बुवा शिवकुमार भने छोराहरुलाई नेपाल सरकारकै अधिकृत बनाउन चाहन्थे । छोराहरु भर्ती भएर जाउन भन्ने नलागेको बताउँदै शिवकुमारले उनीहरुले आफ्नो इच्छा पूरा गरेकाले त्यसमा आफू खुशी भएको बताए । शिवकुमारका दाइ परिवारसहित बेलायतमै छन् । २१ वर्षीय जुम्ल्याहा दाजुभाइले लामो समयदेखि काठमाडौंकै क्लासरुपमबाट तालिम लिएका थिए । यसपटक ब्रिटिश गोर्खा सैनिकमा अहिलेसम्मकै बढी संख्यामा भर्ना लिएको छ । ५४ जिल्लाका २३ जातजातिकाट ४३२ जना युवा भर्ती भएका छन् ।
बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले नेपाली यु्वक रोहन श्रेष्ठसँग बिहे गर्ने हल्ला गाइगुइ सुनिदै आएको हो । तर पनि उनीहरुले आधिकारिक रुपमा यसकाे घोषणा गरेका छैन्न । यसै सन्दर्भमा श्रद्धाका बुबा शक्त्ति कपुरले भने उनको विवाहको कुरा हल्ला मात्र भएको बताउँदै आएका छन् । उनले भने, “श्रद्धाको बिहे गर्ने उमेर भएको छैन । उनी अझै बालाखा नै छिन् । उनले जिबनमा धेरै गर्न र धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ ।” बुधबार मात्र बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा र नेपाली व्याइफेन्ड रोहन श्रेष्ठ बाइकमा हिडिरहेको भिडियो भाइरल भएको थियो । लकडाउन खुकुलो भएसँगै बलिउडमा सुटिङ सुरु हुने चर्चा सुनिन थालेको छ । भारतीय अनलाईन पिंकभिल्लाले यस्को बारेमा शक्त्ति कपुरसँग बुझ्न खोजेको थिए । यही सन्दर्भमा उनले कोरोना पुर्णरुपमा निर्मुल नभएसम्म छोरीलाई सुटिङमा नपठाउने पनि बताएका छन् । बाघी ३ कि अभिनेत्री श्रद्धा कपुर व्याइफ्रेण्ड रोहनका साथ घ
इतिहासमै पहिलो पटक सरकारको समर्थनमा जनता सडकमा
काठमाडौं । जनताका तागतले कैयाैँ इतिहास लेखिएका छन् । जनताकै कारण नेपालमा कैयाैँ राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । जनताले चाहे भने जे पनि हुन सक्‍छ । अहिले नेपाली जनताकाे एउटै चाहाना हाे – केपी शर्मा अ‌ाेली नेत‌ृत्वकाे सरकार ढाल्‍न पाइँदैन । जनताले सरकार ढाल्न खाेज्‍नेविरुद्ध खबरदारी थालिसकेका छन् । राष्ट्रिय झण्‍डा बाेकेर सडकमा निस्किएका छन् । ‘केपी शर्मा अ‌ाेली नेत‍ृत्‍वकाे सरकार ढाल्न पाइँदैन,राष्ट्र र जनताका पक्षमा द‌ृढ भएर लागेकाे सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ, नेपालकाे शीर उचाे बनाएका प्रधानमन्त्री हटाउँन पाइँदैन, विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन‍्’- सडकमा निस्किएका जनता भन्छन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दल सत्ता सञ्चालनमा अयोग्य भएको भन्दै ०५९ सालमा राजकीय सत्ता हातमा लिनुभयाे । त्यसपछि राजनीतिक दलले आन्दो लनको घोषणा गरे । तर, नागरिक सडकमा निस्किएनन् । जतिबेलासम्म नागरिक स
बाँदर धपाउन ‘मंकी एयर गन’ वितरण।
सन्धिखर्क : केहि वर्षदेखि खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली बाँदरले सखाप पार्न थालपछि छत्रदेव गाउँपालिकाले 'मंकी एयर गन' वितरण गरेको छ। बाँदरले बाली खाने भएपछि कृषक चिन्तित बनेका थिए। कृषकहरुको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिका भित्रका आठ वडामा ५ वटाका दरले बाँदर धपाउने यन्त्र वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोख्रेलले जानकारी दिए। दैनिक जसो बाँदरले किसानको अन्नबाली खाइदिने र क्षति गरेकाले अन्नबाली संरक्षणको लागि कार्वन राखेर बन्दुक पड्काए जस्तो आवाज आउने र त्यो आवाज सुनेर बाँदर डराएर भाग्ने भएकाले मंकी एयर गन वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृत खिमानन्द भुसालले बताए। जिल्लाका विभिन्न गाउँमा बाँदरले अन्नबाली सखाप पार्दै आएको छ। अघिल्ला वर्षमा छत्रदेव गाउँपालिकाले गाउँ-गाउँमा बाँदर हेरालुको समेत व्यवस्था गरेको थियो। मकै बारीमा पसेको बाँदर लखेट्ने क्रममा गत वर्षक
एजेन्सी । संसारमा कहिलेकाँही अनौठो लाग्दा घट‘ना सार्वज्निक हुन्छन् । प्रकृतिलाई नै चु’नौती दिने यस्तो घटनाले हामीलाई अचम्म बनाउँछ । भारतमा एक अनौठो घ’टना सार्वजनिक भएको छ । विविसीले दिएको समाचार अनुसार एक महिला ३२ वर्षदेखि सामान्य जीवन बाँचिरहेकी थिइन् । उनको विवाह भएको ९ वर्ष बितिसकेको थियो र वैवाहिक जीवन पनि राम्रो चलिरहेको थियो तर अ’चानक उनलाई थाहा भयो कि उनी एक पुरुष हुन् र उनलाई टेस्टिक्यूलर क्या न्स र छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बीरभूममा बस्ने यी महिला शारीरिक रुपमा त महिला हुन् तर आनुवंशिक रुपमा उनी पुरुषको रुपमा जन्मिएकी थिइन् । जब उनको स्थिती अस्पताल पुग्यो तब डाक्टर पनि चकित परे र उनीहरुले यो समस्याबारे थाहा पाउनका लागि एउटा लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्यो । त्यसपछि थाहा भयो कि यी महिलालाई एन्ड्रोजन इन्सेन्सिटिभिटी सिन्ड्रोम छ जसमा व्यक्तिको शरीर महिलाको हुन्छ तर क्रोमोसोम
रोपाइँ गर्न गएका किसान सँगको झड’पमा ४ प्रहरी घाइते
काठमाडौं । ललितपुरको खोकनामा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ। नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा पाएको तराईँ–मधेस द्रु’त मार्ग फास्ट ट्र्याकको जीरो किलो क्षेत्रमा प्रहरी र स्थानीयबीच झ’ड’प भएको हो। सुडोल फाँटमा रोपाइँ गर्न गएका स्थानीय’लाई प्रहरीले रोक्न खोजेपछि झ’डप भएको हो । झ’ड’पमा परी ४ जना प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरीले स्थितिलाई नि’यन्त्र’णमा लिनका लागि ७ राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। झडपपछि अहिले सुडोल फाँटमा स्थानीयले पुनः धान रोपेका छन्। फाष्ट ट्रयाक पर्ने जमिनमा खोकनाका किसानले खेत रोप्न थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। किसानहरूले आफ्नो जग्गाको मुआब्जा नपाएकोले खनजोत गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ र मातातीर्थ(भक्तपुर १३२ केभी प्रसारणलाइन खोकना हुँदै बनाउने तयारी छ । तर स्थानीयबासीले भने विरोध गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय सरक
काठमाडौं । ललितपुरको खोकनामा स्थानीय र प्रहरीबीच झ’डप भएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा पाएको तराईँ–मधेस द्रु’त मार्ग फास्ट ट्र्याकको जीरो किलो क्षेत्रमा प्रहरी र स्थानीयबीच झ’ड’प भएको हो । सुडोल फाँटमा रोपाइँ गर्न गएका स्थानीय’लाई प्रहरीले रोक्न खोजेपछि झ’डप भएको हो । झ’ड’पमा परी ४ जना प्रहरी घाइते भएका छन् । प्रहरीले स्थितिलाई नि’यन्त्र’णमा लिनका लागि ७ राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ । झडपपछि अहिले सुडोल फाँटमा स्थानीयले पुनः धान रोपेका छन्। फाष्ट ट्रयाक पर्ने जमिनमा खोकनाका किसानले खेत रोप्न थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। किसानहरूले आफ्नो जग्गाको मुआब्जा नपाएकोले खनजोत गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। १३२ केभी प्रसारणलाइन खोकना हुँदै बनाउने तयारी छ । तर स्थानीयबासीले भने विरोध गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि जमिन अधिग्रहण
कक्षा कोठा भित्र नै शि’क्षक र छात्रा यस्तो ह’र्क’त गर्दै गरेको अवस्थामा भे’टीए !
हाम्रो समाजमा गुरुको स्थान निकै उच्च हुन्छ । कैयौं गुरुहरु यस्ता थिए कि उनीहरुको अहिलेसम्म उदाहरण दिइन्छ । तर, अर्कोतर्फ अहिले केही शिक्षकले आफ्नो मर्या’दा नै भुल्न थालेका छन् । पछिल्लो समयमा एकजना शिक्षक र स्कुले छात्राको केही फोटो सामाजिक संजालमा भाईरल बनेको छ । कुनै कक्षामा लिएको प्रस्ट रुपमा देखिने यी फोटोहरुमा शिक्षकको अंगालोमा बेरिएकी एक युवती स्कुले ड्रेसमा नै छिन् । भानिन्छ प्रेम अन्दो हुन्छ यसले कुनै कुरालाई मतलब गर्दैन तर एक अधबैसे पुरुष र आफ्नै सानी छात्रा जस्तै देखिने यी बालीकाको यो कस्तो प्रेम हो त्यो भने बुझ्न सकिने खालको छैन । पछिल्लो समयमा विभिन्न फेसबुकमा यो तस्विर भाईरल बने पनि यो कहाको र कसको भन्ने तथ्य चाँही सार्वजानीक छैन । भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले ती शिक्षकलाई प’क्राउ गरेर जे’ल पठाएको छ । आगराको दूरअछनेराको साधन गाउँमा रहेको श्रीमती बादामी देवी पब्लिक स्क
फिल्म निर्माता तथा अभिनेता भुवन केसीलाई फेरी अर्की महिलाले पनि दु’ब्र्य’वहार गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकी छन् । उनले भुवन केसीले आफुलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत दु’ब्र्यव’हार गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनी स्वेता रेग्मी हुन् । स्वेताले भुवनले आफुलाई पनि सामाजिक सञ्जाल फेसवुक च्याटमा कुरा गर्दै अपश’ब्द बोलेको बताएकी छन् । उनले भुवनले च्याटमा बोलेको कुराको स्कृन सर्ट पनि सार्वजनिक गरिदिएकी छन् । उनी क्यानेडामा बस्दै आएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा एक भिडियो पनि सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले आफुले भुवन केसीसंग गरेको सो कुरा सार्वजनिक गर्नुको पछाडी आफु दुब्र्य’वहारमा परेको हो भनेर जानकारी दिनुभन्दा पनि अभिनेत्री सामग्रीले आफुलाई भएको दुब्र्य’वहारको कुरा गर्दा उनी माथि लगाइएको आ’रोपका कारण सार्वजनिक गरेको बताएकी छन् । उनले कुनै पनि महिलाले आफु माथि त्यस्ता कुरा त’त्काल सार्व
को’रोना सं’क्र’मि’त युवकले जब सडकमा कारको अगाडी सुतेर राखे यस्तो माग, प्रहरीले पनि तुरुन्तै गरिदियो पुरा !
एजेन्सी । विश्वव्यापी रुपमा को’रोना फै’लिए’को बेलामा वि’श्वभ’रवाट कहिले काँही अनौ’ठा खबर सार्वजनिक हुने गरेका छन् । हालै भारतको उत्तर प्रदेश को मेरठ शहरमा एक युवाले अनौठो ब्यवहार गरेका छन् । एक जना युवक मेरठ शहरको बेगमपुल चौराहामा सडकमै गाडीको अगाडी सुते । उनले आफुलाई को’रोना लागेको र कसैले पनि आफुलाई नछुन भन्दै गाडीको अगाडी लम्पसार परेका थिउ । जव ति युवकले यस्तो गरे वरपरका सबै डराएर उनलाई टाढावाट हेर्न थाले । कारको आगाडी लम्पसार परेका उनलाई कसैले उठाउने साहस पनि गरेन । स्वास्थ्य विभागले आफुलाई परिक्षण नगरिदिएका कारण आफुले यस्तो गर्नुपरेको उनले बताए । बिच सडकमा यस्तो हर्कत गरेपछि ति युवकलाई प्रहरीले सम्झाई बुझाई गरेर एम्बुलेन्समा राखेर अस्पताल तर्फ लगेको छ । आफुले आग्रह गर्दा स्वास्थ्य सेवा नपाएका ति युवाले सडकमा आएर तमासा गरेपछि भने तुरुन्तै एम्बुलेन्समा बसेर अस्पताल जान पाएका छन् ।